Ezigbo ụlọ oriri na ọ Serviceụ Serviceụ na-agbasa na Laos na Eastin Hotel Vientiane
Home » etn » Ezigbo ụlọ oriri na ọ Serviceụ Serviceụ na-agbasa na Laos na Eastin Hotel Vientiane
Ndị otu ụlọ ọrụ Absolute Hotel Services mara ọkwa na họtel mbụ na Laos ịgbakwunye na pọtụfoliyo ụlọ ọrụ. A na-ezubere Eastin Hotel Vientiane Laos imeghe na njedebe ikpeazụ nke 2021.
Eastin Hotel Vientiane ga-egosipụta ụlọ iri anọ na itoolu nwere ọnụ ụlọ ndị mara mma na ime ụlọ na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ maka nkasi obi nke ndị ọbịa niile. Lọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ahụ ga-agụnye ụlọ oriri na ọ diningụ diningụ ụbọchị niile, ụlọ oriri na ọtyụtyụ pụrụ iche, ọdọ mmiri n'èzí na mgbatị ahụ.
Vientiane bụ isi obodo na obodo Laos kachasị ukwuu yana ebe ndị njem na-aga njem na-aga ebe ndị ọzọ na mba ahụ yana isi gọọmentị na ụlọ ọrụ. Hotellọ nkwari akụ ahụ dị n'akụkụ osimiri Mekong nwere echiche ndị gafere na Thailand. Ọ bụ obere ụzọ si ọdụ ụgbọ elu mba ofesi. Isi ụlọ ọrụ dị na Laos maka ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ na-agba ọsọ ọsọ site na ndịda China dị nso na họtel ahụ.
“Obi dị anyị ụtọ ịnabata ụlọ oriri na nkwari akụ mbụ anyị na Vientiane, Laos iji sonyere ezinụlọ Eastin anyị, ụlọ oriri na ọ Ourụ Ourụ anyị ga-enye ndị ọbịa ohere ịnọ jụụ na ntọala mmiri, ebe ọ bụ na ha ga-anọ ole na ole site na etiti obodo yana ọdịbendị ọdịnala ya bara ụba. Eastin bụ ihe niile gbasara ịbuga ahụmịhe ọhụụ nke bara uru maka oge niile. Anyị na-atụ anya ịnabata ndị ọbịa anyị mgbe ha họọrọ isoro anyị. ” kwuru Jonathan Wigley, onye isi oche nke Absolute Hotel Services Group.
Ihe omume ntanetị SKAL na-enweta nnukwu ndị bịara na AGM akụkọ ihe mere eme
Beijing Kpọọ maka Open na Inclusive International Cooperation gafee mpaghara